PEACEFUL PA: June 2015
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 06
ထာဝရဘုရား ကြွတော်မူရာလမ်းကို ပြင်ကြလော့ . .
(ဆာလံ ၂၄း၉ ) ဟေရှာယ ၄း၁-၁၁။ လု ၃း၃-၁၈
ထာဝရဘုရားအတွက် လမ်းခရီးတော်ပြင်ဆင်ဖို့ နှစ်ခြင်းဆရာယောဟန်က တောမှာ ဟစ်ကြော်ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ခေတ် လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးတွေကို ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ။ ကျွန်တော့စိတ်နှလုံး ခြောက်သွေ့လွင်ပြင်ကို ဥပမာအနေနဲ့ ပြင်ဆင်ပြပါမယ်။
( ၁) ချိုင့်ဝှမ်းရာရှိသမျှကို ဖို့ရမယ်။
ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်လို့ သိမ်ငယ်၊ နိမ့်ကျနေတဲ့ အတွေးတွေကို ဖျက်စီးပစ်ရမယ်။ သံသယနဲ့ စိတ်ပျက် အားလျော့တာတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ရမယ်။ အတ္တနှင့် ဇာတိပကတိ အလိုဆန္ဒတွေကိုလည်း စွန့်လွှတ်ရမယ်။ ဒီလို မှောင်မိုက် နက်ရှိုင်းတဲ့ ချိုင့်ဝှမ်းတွေတလျှောက်မှာ ထာဝရဘုရားအတွက် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ တင့်တယ်တဲ့ လမ်းကလေး ပေါ်လာရမယ်။
( ၂ ) တောင်ကြီးတောင်ငယ်ရှိသမျှကို ဖြိုရမယ်။
ကိုယ်ကိုကိုယ် အထင်ကြီး၊ ကိုယ်ဖြောင့်မတ်တာကို ဝါကြွားနေတာတွေ နှိမ့်ချလိုက်ပြီး၊ ရှင်ဘုရင် ကြွရာ မင်းလမ်းအဖြစ် ညီညာစေရမယ်။ ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့ ရှင်ဘုရင်ဟာ မာနထောင်လွှားသူ၊ ဘဝင်မြင့်နေသူတွေကို သနားမှာ မဟုတ်ဘူး။ သခင်ဘုရား ချီးကျူးမှာက စိတ်နှိမ့်ချသူနဲ့ စိတ်နူးညံ့သိမ်မွေ့သူတွေသာ ဖြစ်တယ်။ စိတ်မသာ ညဉ်းတွား လာတတ်ဖို့ ကိုယ်တော် ညှိညွှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်နေမြင့်သူတွေကိုတော့ ထာဝရဘုရား ရွံရှာတော်မူပါတယ်။
( ၃ ) ကောက်တဲ့လမ်းတွေ ဖြောင့်ရမယ်။
လှိုင်းခတ်လို့ လှုပ်ရှားသလို ကွေ့ကောက်တတ်တဲ့စိတ်ဟာ ဘုရားသခင်အတွက် ရှင်းလင်း ဖြောင့်တန်း နေရမယ်။ တကယ် သန့်ရှင်းတဲ့ အသက်တာဖြစ်ပါစေ။ စိတ်နှစ်ခွရှိသူဟာ သမ္မာတရားရဲ့ ဘုရားသခင်ကို တကယ် မသိကျွမ်းပါဘူး။ သတိပြုပါ။ ဝိညာဉ်အရာအားလုံးကို သိမြင်တော်မူတဲ့ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်မှာလို အရာရာမှာ ရိုးသား မှန်ကန်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
( ၄ ) ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းတွေလည်း သုတ်သင်ပြင်ဆင်ရမယ်။
အပြင်ဖက်က ခလုပ်ခသင်းတွေကို ရှင်းလင်းပစ်ရမယ်။ ပုန်ကန်ခြင်း ဆူးပင်၊ တောရိုင်းပင်တွေကို ဆွဲနှုတ်ပစ်ရမယ်။ သခင်ဘုရားဟာ သန့်ရှင်းသူတို့နဲ့ ကြွလာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ကို ချီးမွမ်းမယ်။ ရွေးနှုတ်ခြင်း ကျေးဇူးတော်ကြောင့် အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ သင့်စိတ်နှလုံးထဲမှ လမ်းကလေးကို ကိုယ်တော် တွေ့မြင်ပါစေ။ သင့်စိတ်ဝိညာဉ် ထာဝရ ကောင်းကြီးခံစားဖို့ အောင်မြင်ခြင်း ဘုန်းအသရေနှင့်တကွ ကိုယ်တော် ဝင်ရောက်လာပါစေသော။
မေးခွန်း ။ ။ သင့်စိတ်နှလုံး အသင့်ဖြစ်နေပါပြီလား။
ဆင်ခြင်ရန်။ ။ ရှင်ဘုရင်ကြွလာလုနီးပြီ။
Posted by Papa at 11:25 PM
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 05
အလုံးစုံတို့၌ အလုံးစုံဖြစ်တော်မူသော ယေရှုခရစ်တော်
ဟေရှာယ ၄၉း ၅ - ၁၂ ဧဖက် ၁း ၁၅ - ၁၃
ယုံကြည်သူတိုင်းကို ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ဟာ ယေရှုခရစ်တော် ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ သခင် ခရစ်တော်အားဖြင့် ရရှိသမျှကို ရေတွက်လို့ ရနိုင်မလား။ “အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်၏ ဇာတိအဖြစ်တော်၏ ပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည် ခရစ်တော်၌ ကိုယ်ထင်ရှား၍ ကျိန်းဝပ်တော်မူ၏။” ( ကော ၂း ၉) ခဏဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ ယုံကြည်သူတွေမှာ ခရစ်တော်အားဖြင့် ရထားတဲ့ စစ်မကုန်၊ ပြောလို့မမှီတဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများစွာ ရှိပါတယ်။ ဧမာနွေလဖြစ်တော်မူသော ခရစ်တော်၌ ရှိသမျှကို သင် ပိုင်ဆိုင်တယ်။ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ခရစ်တော်ပိုင်သမျှ အရာအလုံးစုံတို့ကို ထာဝရပိုင်ဆိုင်ရဖို့ ဘုရားသခင် သနားလို့၊ ကျေးဇူးပြုတော်မူလို့ ဖြစ်တယ်။
“အလုံးစုံ” ဆိုတာကို ရေတွက်ကြည့်ကြပါစို့။ “တန်ခိုးတော်” ကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ “ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်း၊ စီရင်ပိုင်သော အခွင့်တန်ခိုးရှိသမျှတို့ကို ငါခံရပြီ။” (မဿဲ ၂၈း ၁၈) အဲဒီတန်ခိုးဟာ သင့်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကို ခွန်အားနဲ့ ပြည့်စုံစေပြီး၊ အခက်အခဲတွေကို အောင်မြင် ကျော်လွှားစေမယ်။ စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်း တွေကို အောင်မြင်စေပြီး၊ ဘုရားသခင်နဲ့အတူ တည်ကြည်စွာ လျှောက်လှမ်းစေကာ အိမ်တော်သို့တိုင် ပို့ဆောင်မယ့် တန်ခိုးတော် ဖြစ်တယ်။ မေတ္တာတော်ကို ဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ အနန္တမေတ္တာတော်ကို အသင့်ပြင်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်နှလုံးထဲသို့ သွန်းလောင်းတော်မူတဲ့အခါ၊ သင်က “မေတ္တာတော်ဟာ ငါ့အတွက်ပါ” ဟု ပြောမှာပါ။ အဲဒီနောက် - သင့်ထံမှ အခြားသူတွေထံ ကိုယ်တော်မေတ္တာ စီးထွက်နေပါလိမ့်မယ်။
တရားတော်မူခြင်းကိုလည်း ဆင်ခြင်ကြည့်ပါဦး။ ဒီလောက် မြင့်မြတ်လှတဲ့ ဂုဏ်တော်ဟာ သင့်အတွက် ဖြစ်ပါ့မလား။ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ရပေမယ့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့် သင့်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ တရားတော်မူတဲ့ အဘဘုရားဟာ သင့်ကို လုံခြုံစိတ်ချစေမယ့် ဂတိတော်ရှိသမျှကို တည်စေတော်မူမယ်။ “စုံလင်သောလူသား” အဖြစ် သခင်ယေရှုမှာ ရှိခဲ့သမျှဟာ သင့်အတွက် ဖြစ်တယ်။ ခမည်းတော် လက်ခံတော်မူတဲ့အတွက် သင့်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရှေ့တော်မှာ ရပ်ခဲ့တယ်။ ချစ်သောစာရှုသူ၊ ခရစ်တော်ကို ဘုရားသခင် လက်ခံခြင်းဟာ သင့်ကို လက်ခံခြင်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ချစ်တော်မူသော သားတော်အပေါ်၌ တည်နေတဲ့ ခမည်းတော်ရဲ့ မေတ္တာဟာ သင့်အပေါ်မှာလည်း ယခုပင် တည်နေပါတယ်။ ခရစ်တော်ပြုခဲ့သမျှဟာ သင့်အတွက် ဖြစ်သလို၊ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တော်ရဲ့ စုံလင်တဲ့ ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟာ “ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျေးဇူးတော်ကြောင့်” သင့်အပေါ်မှာ တည်လာပါတယ်။ ကိုယ်တော်ဟာ အလုံးစုံတို့၌ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုံးစုံဖြစ်တော်မူပါတယ်။ (အရာရာမှာ ကိုယ်တော်ကြောင့် ပြည့်စုံသွားပါတယ်။)
Posted by Papa at 1:55 AM
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 04
ဟေရှာယ ၄၀း၂၆- ၄၁း၎။ ၂ကော ၁၂း၉-၁၀ ။
“ငါ့ကျေးဇူးသည် သင့်အဖို့ လောက်ပေ၏။”
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အရာဟူသမျှ အသစ်ပြုပြင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာမှန်သမျှ ကိုယ်ပိုင် ရပ်တည် ရှင်သန်နိုင်စွမ်း မရှိဘူး။ အဝတ်အတွက် မပူရ၊ ဒုက္ခကြောင့် အသက်မတိုရတဲ့ သစ်ပင်များပင်လျှင်၊ မြေဆီလွှာမှ အဟာရစုပ်ယူပြီး
ကောင်းကင်မိုးရေအားဖြင့် လန်းဆန်းလာရပြန်တယ်။ ကြာရှည် ကြီးထွားပေမယ့်လည်း၊ တနေ့တော့ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးကြရတယ်။
လူအသက်ဟာ ဘုရားသခင်ထံက အသစ်ပြုပြင်မခံရဘဲ မတည်နိုင်ဘူး။ တနေ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ပျက်စီးမယ်။ မမြင်ရတဲ့ အတွင်း စိတ်ဝိညာဉ်ကတော့ နှုတ်ကပတ်တော် အစာစားခြင်း၊ တရားဒေသနာ ကြားနာခြင်း၊ ဆင်ခြင် အောက်မေ့ခြင်း အားဖြင့်သာ တည်နေနိုင်တယ်။ ဒါက ဘုရားပေးတဲ့ ကျေးဇူးတော်နည်းလမ်းပါပဲ။ ဒီနည်းကို စွန့်ပယ်ထားရင် ဝိညာဉ် ဆင်းရဲမယ်။ အသင်းတော်ဟာ ဝိညာဉ် ပိန်လှီအားပြတ်၊ ချိနဲ့နေမှာလည်း အံ့ဩစရာ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
သန့်ရှင်းသူတို့ နိုးထကြစို့။ နှုတ်ကပတ်တော် နေ့စဉ် မလေ့လာ။ နေ့စဉ် ဆုမတောင်းဘဲ အသစ်ပြုပြင်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အားအင်လည်း
ပြည့်မလာနိုင်ဘူး။ ဝိညာဉ် အားနည်းနေတာဟာ ပင်ကိုယ်ဗီဇကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်တိုင် ဂရုမစိုက်လို့ပါ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့ အသစ်ပြုပြင်ခြင်းမခံရဘဲ၊ မရဏာနိုင်ငံ တန်ခိုးကို ဖျက်ချိုးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဖဘုရား စိတ်နာကျင်တဲ့ အချိန်ကာလကိုလည်း ရင်ဆိုင်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး။
အို၊ သစ်ပင်ငယ်၊ လာမယ့် လွေပွေသရမ်းဒဏ်ကို ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့ရာ သင့်အမြစ်တွေကို ကျောက်ပေါ်မှာ စွဲမြဲစွာ ကုပ်တွယ်ထားပြီလား။ အိုသဘောင်္ငယ်၊ အသက်တာရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ မုန်တိုင်းတွေကြားမှာ ဘေးကင်းဖို့ရာ ကျောက်ဆူးကို ကျောက်ပေါ်မှာ စွဲမြဲထားပြီလား။ ခွန်အားဆိုတာ ကိုယ့်ထံက မလာ။ ဗီဇကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါ။ ထာဝရဘုရားထံမှသာ ရပါတယ်။ ကိုယ်တော်တပါးတည်းသာ ခွန်အားနဲ့ အသက် ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်တော်တပါးတည်းသာ နေ့တိုင်း အသစ်ပြုပြင် ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဆင်ခြင်ရန် ။ ။ “ထာဝရဘုရားကို မြော်လင့်သောသူတို့မူကား အားပြည့်ကြလိမ့်မည်။” -ဟေရှာယ ၄၀း၃၁
Posted by Papa at 2:36 AM
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 03
ဆုတောင်းပဌာနာပြုခြင်းအမှု (ကို) အမြဲပြု၍- -
ဆာလံ ၅၅း ၁ - ၁၇ ကောလောသဲ ၄း ၂
“စိတ်ဝိညာဉ်ကား စေတနာရှိငြားသော်လည်း၊ ကိုယ်မူကား အားနည်းသည်။” (မာကု ၁၄း ၃၈) သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ဆုတောင်းခြင်းဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ဆုတောင်းဖို့ အားပေးတဲ့ တရားစကားတွေ၊ ဘုရားရဲ့ ဂတိတော်တွေ စသည်ဖြင့် အကျယ်တဝင့် ပါပါတယ်။ ကျမ်းစာအုပ်ကို ဖွင့်ကြည့်ရင် ကမ္ကာ ၄း၂၆ မှာ “…. ထိုကာလ၌ ထာဝရဘုရား၏ နာမတော်ကို အမှီပြု၍ ကိုးကွယ်စပြုကြလေ၏။” “Then began men to call upon the name of the Lord.” လို့ စတင် တွေ့ရတယ်။ ဆုတောင်းသူတွေကိုလည်း သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ နေရာတိုင်း အမှတ်မထင် တွေ့ရတတ်တယ်။ ယဗုတ်ချောင်းနားမှာ နပမ်းလုံးပြီး ဆုတောင်းတဲ့ ယာကုပ် (က ၃၂း ၂၄ -၃၀)၊ ပြုတင်း တံခါးဖွင့်ပြီး တနေ့ သုံးကြိမ် ဆုတောင်းတဲ့ ဒံယေလ (ဒံ ၆း ၁၀ - ၁၁)၊ ထာဝရဘုရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ အော်ဟစ်တဲ့၊ က္ကုသရေလအမျိုး၌ ချိုမြိန်စွာ သီချင်းဆိုတဲ့ ဒါဝိဒ်။ ဒီ့ပြင် ဧလိယက ကရမေလတောင်ထိပ်မှာ၊ ပေါလုနဲ့ သိလတို့က အချုပ်ခန်းထဲမှာ ဆုတောင်းခဲ့တယ်။
ဂတိတော်များစွာနှင့် အမိန့်တော်များစွာ ဘုရားသခင် ပေးသနားထားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ။ ဆုတောင်းဖို့ လိုတယ်၊ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သွန်သင်ချင်လို့ ဖြစ်တယ်။ နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာ ထင်ရှားစွာ ပြုတော်မူသမျှဟာ ကျွန်တော်တို့ အသက်တာမှာလည်း အထင်အရှားဖြစ်စေလိုတာ
သေချာတယ်။ ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်း အများကြီး မိန့်တော်မူ ထားတာဟာ ဆုတောင်းဖို့ သိပ်လိုအပ်လို့ ဖြစ်တယ်။ ကောင်းကင်မရောက်မှီအထိ မခြားမလပ် ဆုတောင်းနေဖို့ ဝိညာဉ်ရေးမှာ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ ဆုတောင်းစရာအကြောင်း မရှိဘဲ ဖြစ်နေသလား။ ကိုယ်ဆင်းရဲတာ ကိုယ်မသိဘဲ နေမှာ စိုးရိမ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ဘုရားသခင်ထံမှာ အသနားခံစရာ မရှိဘဲ ဖြစ်နေသလား။ ကိုယ့်သနားစရာအဖြစ်ကို ဘုရားသခင်ပြတော်မူပါစေ။ ဆုမတောင်းတဲ့သူဟာ ခရစ်တော်ကို မရတဲ့သူပါ။ ဆုတောင်းခြင်းဟာ ယုံကြည်သူ ကလေးငယ်ရဲ့ စကား မပီကလာ ပြောတဲ့အသံ ဖြစ်သလို၊ ခရစ်ယာန်စစ်သူရဲရဲ့ ကြွေးကြော်သံလည်း ဖြစ်တယ်။ သခင်ယေရှုထံပါး ဝပ်တွားနေတဲ့ သေလုဆဲ သန့်ရှင်းသူရဲ့ အော်ဟစ် ငိုကြွေးသံလည်း ဖြစ်တယ်။ ဆုတောင်းခြင်းဟာ စစ်မှန်တဲ့ ယုံကြည်သူရဲ့ ခွန်အား၊ ဂုဏ်အသရေနဲ့ သက်သာခြင်း ဖြစ်သလို၊ အသက်ရှူခြင်းနဲ့ စကားဝှက်လည်း ဖြစ်တယ်။ ဘုရားသားမှန်ရင် ဆုတောင်းရင်း ခမည်းတော် မျက်နှာကို နေ့တိုင်း ရှာပါ။ အသက်တာမှာ သန့်ရှင်းခြင်း၊ နှိမ့်ချခြင်း၊ စိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့ သည်းခံခြင်း ရှိဖို့ ကျေးဇူးတော် ပလ္လင်ရင်းကို တိုးဝင်၊ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။ဆင်ခြင်ရန်။ ။ မခြားမလပ် ဆုတောင်းတဲ့အခါ. . . . မပြတ်မလပ် ကောင်းကြီး ပေးတော်မူပါတယ်။
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 02
သီချင်း ၁း၁-၇ ဖိလိပ္ပိ ၄း၎-၉
“ ကျွန်မတို့သည် ကိုယ်တော်ကြောင့် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြမည်။” ( သီချင်း ၁း၎ )
ဘုရားသခင်၏သားမှန်သမျှက အာမင် လို့ ဝန်ခံကြပါစေ။ ဆာလံဆရာနှင့်အတူ “လာကြ။ ထာဝရဘုရားအား ရွှင်လန်းစွာသီချင်း ဆိုကြကုန်အံ့။ ငါတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရာကျောက်ကို ကျူးဧကုန်အံ့။” ( ဆာလံ ၉၅း၁ ) ရွေးကောက်ခံရသူ၊ ယုံကြည်သူ ဘုရားသားတွေအနေနဲ့ ဝမ်းနည်းစိတ်ကို နေရာမပေးဘဲ၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်ကို ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့ အလံကိုသာ တလူလူလွှင့်ထားကြမယ်။ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေ ကြုံရတဲ့ ဒုက္ခကြောင့် ညည်းသလို မညည်းဘဲ ၊ သက်သာခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ ဘုရားသခင်ကိုပဲ ချီးမွမ်းနေမယ်။
ယုံကြည်သူတွေဟာ ဆုကျေးဇူးတွေ ပေးသနားတော်မူတဲ့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရား ကျိန်းဝပ်ရာ ဗိမာန်တော်တွေ ဖြစ်တယ်။ ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ နာမတော်ကို ကောင်းကြီးပေးပြီး၊ ဝတ်ပြုမြဲ ပြုနေမယ်။ သခင်ယေရှုဘုရားဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းသရဖူကို ဆောင်းတော်မူရမယ်။ ရှေ့တော်မှာ ညဉ်းညူပြီး ကိုယ်တော်ကို မကဲ့ရဲ့ဘူး။ ဂတိတော်က … “ ငါသည်လည်း ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့်အတူ အစဉ်မပြတ်ရှိသည်။” ( မဿဲ ၂၈း၂၀ ) သခင်ဘုရား ရွေးနှုတ်ထားတဲ့သူတွေ ….. “အစဉ်မပြတ် ဝမ်းမြောက်ခြင်း ရှိကြလော့” လို့ အမိန့်တော်ရှိပါတယ်။ ထာဝရ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းရာသီချင်းတွေ သီဆိုကျူးဧရမယ့်နေ့ဟာ မဝေးတော့ဘူး။ ယေရုရှလင်မြို့သစ်မရောက်မှီ ယခုမှစပြီး၊ ချီးမွမ်းကျင့် ကျင့်ထားနှင့်ကြပါစို့။
“ …. ကိုယ်တော်ကြောင့် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြမည်။” ဒီလောကမှာ အသက်ရှင်စဉ် သခင်ဘုရား၌ ဝမ်းမြောက်နေတဲ့ စိတ်ကို ထိန်းချုပ်ထားဖို့ လိုသလား။ ကျေးဇူးတရားအောက်ရှိ သားတွေလို “နာဒုပင်၊ ဟင်္နာတော၊ ကြံပင်၊ သစ်ကြပိုးပင်” တို့ထက် သာတဲ့၊ အဘိုးထိုက်တဲ့ ကိုယ်တော်ကို မရှာဘဲနေသလား။ (သီချင်း ၄း၁၃၊၁၄ ) မခြားမလပ် ချီးမွမ်းပြီး၊ ဝမ်းမြောက်နေရမယ် မဟုတ်လား။ ထာဝရ စောင့်စားခံစားထိုက်တဲ့ “အလုံးစုံ” ကို သခင်ယေရှုအားဖြင့် ရတယ် မဟုတ်လား။ ကိုယ်တော်ဟာ ကောင်းမြတ်တဲ့ အရာအလုံးစုံတို့ရဲ့ မူလဖြစ်တယ်။ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ရှိသမျှတို့ရဲ့ စမ်းရေတွင်းလည်း ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ထာဝရ ခံစားရာ အဖို့လည်း ဖြစ်တော်မူတယ်။ ဒီနှစ် တနှစ်လုံး နေ့တိုင်း ကိုယ်တော့်ကြောင့် ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်ကြပါစို့။
ဆုတောင်း ။ ။ ကိုယ်တော်၌ အစဉ်ဝမ်းမြောက်နေမယ့်အကြောင်း ၊ ကိုယ်တော်ရဲ့ ကြီးမြတ်ခြင်းတွေကို ပြတော်မူပါ ထာဝရဘုရား။
Posted by Papa at 1:05 AM
မိုးသောက်ယံနဲ့ ညဦးယံ - Morning and Evening: Charles Spurgeon 01
Charles Spurgeon ကို Prince of Preachers တရားဟောဆရာ- မင်းသားတပါး၊ ၁၉- ရာစု တမန်တော်၊ ဝိညာဉ်ရေး စာရေးဆရာ၊ အသင်းတော်များစွာ တည်ထောင်သူ၊ ယုံကြည်ခြင်းတရားကို ကွယ်ကာသူ၊ သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ ကျွန် …. စသည်ဖြင့် တင်စားကြတယ်။ မျက်မှောက်ခေတ် ဧဝံဂေလိလမ်းကြောင်းတခုကို ပြိုင်ဘက်မရှိ လင်းစေခဲ့သူလည်း ဖြစ်တယ်။ လန်ဒန်မြို့ရဲ့ အချက်အချာဖြစ်တဲ့ Metropolitan Tabernacle မှာ လူ ၅၀၀၀- ၆၀၀၀ ခန့်ကို တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း နှစ်ပေါင်း ၃၀- ကျော် တရားဟောခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ လူသန်းပေါင်းများစွာတို့ ကောင်းကြီးခံစားရဖို့ရာ သူ့တရားဒေသနာတွေနဲ့ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေကို နိုင်ငံခြား ဘာသာစကား ဒါဇင်များစွာနဲ့ ပြန်ဆိုခဲ့ရတယ်။ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀-ခန့်ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အရပ်ရပ်က ခရစ်ယာန်တွေက သူ့စာအုပ်တွေကို ဖတ်ရှုနေရဆဲ ဖြစ်လို့ ……..
Spurgeon … ကား `သေသော်လည်း ယခုပင်တရားဟောသေး၏။” (ဟေဗြဲ ၁၁း၎)
သူဟာ Calvinist တဦးဖြစ်ပြီး၊ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်သူလည်း ဖြစ်တယ်။ သူ့ခေတ်မှာ အသင်းတော်တွေကို မှောက်လှန်နေတဲ့ ….. “New Theology” ခေါ် မြွေဆိုးအဆိပ်အတောက် Liberalism ကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ပြတ်သားပြတ်သား ဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဩဝါဒ ဒီရေတွေကြားထဲမှာ သူ့သခင်အတွက် သစ္စာရှိရှိ တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်ကာ သမ္မာတရားလမ်းမှ လွဲသွားသူတွေနဲ့ မပေါင်းဘဲ သီးခြားရပ်တည်ခဲ့တယ်။
“ကျွန်တော်ဟာ ဘယ်သူ့ ရန်သူမှ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ထာဝရဘုရားရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ ဆန့်ကျင်တဲ့ သွန်သင်ချက်တွေ အားလုံးကိုတော့ ရန်သူပဲ။ ကျွန်တော် အဲဒါတွေနဲ့ ဘယ်တော့မှ မိတ်မဖွဲ့ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ဆီမှာ လှိမ့်ဝင်လာနေတဲ့ အဲဒီကြောက်စရာ ဒီရေလှိုင်းတွေကို ခင်ဗျား တားဆီး ထိန်းချုပ်နိုင်ပါစေ။ ….. ”
Spurgeon စကားတွေက ဒီနေ့ခေတ်အထိ ပြတ်ပြတ်သားသား တရားဟောနေတုန်းပါပဲ။
နွမ်းလျသူကို စောင့်ကြိုနေသော- - ချမ်းသာ
“. . . . . ငါ့ထံသို့ လာကြလော့။ ငါသည် ချမ်းသာပေးမည်။“ (မဿဲ ၁၁း၂၈)
ယောရှု ၅း ၁ - ၁၂ ဟေဗြဲ ၃း ၁၂ - ၁၉
​ဣသရေလလူတွေ တောထဲမှာ ပင်ပန်းစွာ လှည့်လည်ရချိန် လွန်သွားတဲ့အခါ . . တဲရှင်တွေ မလိုတော့ဘူး။ တောနက်တွေ မရှိတော့ဘူး။ မီးမြွေတွေနဲ့ ရန်သူတွေလည်း မတွေ့ရတော့ဘူး။ နို့နဲ့ပျားရည် စီးရာပြည်ဖြစ်တဲ့ ဂတိတော်ရှိတဲ့ ချမ်းသာထဲကို အနှစ် ၄၀- အကြာမှာ ဝင်စားရတယ်။ ဒီစာဖတ်သူများထဲက တချို့လည်း ဒီနှစ်မှာပဲ ကိုယ်တော်ရဲ့ ချမ်းသာထဲကို ဝင်စားရမယ်။ အဲဒီချမ်းသာဟာ တန်ခိုးကြီးတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူတိုင်းရဲ့ ဝမ်းမြောက်ဖွယ် မြော်လင့်ခြင်းပဲ မဟုတ်လား။ ဘုရားသားတွေအတွက် သိုထားတဲ့ ချမ်းသာထဲမှာ သခင်ဘုရားနဲ့ အတူနေခွင့် ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အစဉ်စောင့်စားနေတဲ့ မင်္ဂလာရှိသော မြော်လင့်ခြင်းပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကြည်နူးစရာပြည်တော်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကြားမှာ ယော်ဒန်မြစ်က နောက်ဆုံးကူးဖြတ်စရာ အဆီးအတား တခုအဖြစ် ခြားထားတယ်။ ဒီအတွက် စိုးရိမ်နေသလား။ သေခြင်းထက်မက တခြားမကောင်းမှု ဒုက္ခတွေကိုပါ အောင်မြင်ဖို့ သခင်ဘုရားက ကျွန်တော်တို့ကို မကယ်တင်ခဲ့ဘဲ ဘယ်နေပါ့မလဲ။ ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့ အတွေးတွေအားလုံး မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်စို့။ ယောဒန်လို မှောင်မိုက်အရိပ်လွှမ်းမိုးတဲ့ ချိုင့်ကို တချိန်က ကူးဖြတ်ခဲ့ကြသလို၊ ဝမ်းမြောက် ရွှင်လန်းနေကြစို့။ ကျွန်တော်တို့ဟာ သခင်ဘုရားနဲ့အတူ နေကြရတော့မှာပါ။ အဲဒီတော့မှ ဒီလောကရဲ့ ပင်ပန်းမှုတွေ၊ ဒုက္ခတွေကို နေခဲ့တော့လို့ ဝမ်းပန်းတသာ နှုတ်ဆက်ကြရတော့မှာပါ။
စာရှုသူအများစုကတော့ သခင်ဘုရားရဲ့ အမှုတော်ဆောင်ဖို့ ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာ နေခဲ့ကြရမယ်။ အမှုတော်ဆောင်ရင်း ကောင်းကင်ချမ်းသာရဲ့ အကြိုအရသာကိုတော့ ခံစားနေရတယ်။ “ငါတို့မူကား ယုံကြည်သောသူဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ ချမ်းသာထဲသို့ ဝင်ကြရ၏။” (ဟေဗြဲ ၄း ၃ ) ဝင်စားရမယ့် ကောင်းကင်ချမ်းသာရဲ့ ပထမအရစ် (first instalment ) ကို ရထားပါပြီ။ အမွေရဲ့စားရန် (စရံ) ကတော့ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဘုရား ကိုယ်တိုင်ပါဘဲ။ ဝိညာဉ်တော်ဘုရားက ဘုန်းအသရေကို ဒီအရပ်မှာကတည်းက စတင်ပေးနေပါပြီ။ ကောင်းကင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာတွေကို အခုပဲ မြည်းစမ်း ခံစားနေကြရပါပြီ။
ဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတဲ့ သန့်ရှင်းသူတွေ ကောင်းကင်မှာ လုံခြုံစွာ ထာဝရနေရပြီဖြစ်သလို၊ ကျွန်တော်တို့လည်း ခရစ်တော်၌ လုံခြုံလျှက်ပါပဲ။ သူတို့က ခရစ်တော်နဲ့အတူ ထာဝရ အောင်ပွဲ ခံနေကြသလို၊ ကျွန်တော်တို့လည်း ဒီကမ္ကာပေါ်မှာ သခင်ဘုရားနဲ့အတူ အောင်ပွဲတွေ အစဉ်မပြတ် နွှဲနေလျှက်ပါပဲ။ သူတို့ ကိုယ်တော်ကို ဖူးတွေ့ နေရသလို၊ ကျွန်တော်တို့က ဒီမှာ ကိုယ်တော်နဲ့ တနေ့ပြီးတနေ့ လျှောက်လှမ်းနေတယ်။ ကိုယ်တော် ကတိ တည်ပါတယ်။ (မဿဲ ၂၈း၂၀) စိတ်နှလုံးနဲ့ ရင်းနှီးစွာ မိဿဟာရဖွဲ့ရတာလည်း ကောင်းကင်မှာလိုပါဘဲ။ ကောင်းကင်မှာတော့ ကယ်တင်ရှင်ကို သူတို့ ထာဝရ ချီးမွမ်းနေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့က . . . လျှော့ချီးမွမ်းလို့ ဖြစ်ပါ့မလား။ ချီုးမွမ်းလိုက်ရင်တော့ တောထဲမှာ လှည့်လည်နေရလို့ ပင်ပန်းနွမ်းလျ ဖြစ်နေရတာတွေ သက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။
Posted by Papa at 12:40 AM
U Bet Ei
၁၉၁၀ ခုနှစ်က အမေရိကန်ပြည်၊ Washington ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်၊ Spokane စပို့ကိန်းမြို့မှာ Senora Dodd စဲန်နိုရာ၊ ဒေါ့ဒ် ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီး တယောက်ရှိတယ်။ သူက ဘုရားကျောင်းမှာ အမေနေ့ အမေအကြောင်း တရားဒေသနာ ကြားနာနေတယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ သူ့အဖေအကြောင်း တွေးနေမိတယ်။ သူ့အဖေက ပြည်တွင်းစစ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ စစ်သားဟောင်းကြီးပေါ့။ အမေက အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ ဆုံးသွားတော့ သူ့ဘဝတလျှောက်လုံး အဖေကပဲ ကြည့်ရှုပြုစုခဲ့ရတယ်။ အဖေက ဘုရားတရား ကိုင်းရှိုင်းတယ်။ အဖေ့ကိုရော တခြားအဖေတွေကိုပါ ဂုဏ်ပြုတဲ့နေ့ကလေးတနေ့ ရှိမယ်ဆိုရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲလို့ သူတွေးမိတယ်။ သူ့အဖေက ဇွန်လမှာ မွေးတော့ ၁၉၁၀ ခုနှစ် ဇွန်လ တတိယ တနင်္ဂနွေနေ့ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်၊ Spokane စပို့ကိန်းမြို့မှာ သူ့အဖေကို ဂုဏ်ပြုလိုက်တယ်။
နောင် ၅၆ နှစ်အကြာ ၁၉၆၆ ခုနှစ်မှာ သမတ Lyndon Johnson လင်ဒန်၊ ဂျွန်းဆင်က ဇွန်လ တတိယပတ် တနင်္ဂနွေကို အဖေနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်တဲ့အခါ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဖေနေ့အဖြစ် လူသိများလာတယ်။
၁။ အဖေက သားသမီးတွေကို အချိန်ပေးတတ်ရမယ်။
၁၉ ရာစုမှာ ထင်ရှားတဲ့ Charles Francis Adams ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတယောက် သူ့သားနဲ့ ငါးမျှားသွားတယ်။ ဒိုင်ယာရီမှာ "သားနဲ့ ငါးမျှားသွားတယ်။ တရက် အချိန် ပုပ်သွားတယ်။" လို့ရေးတယ်။ သူ့သားရဲ့ ဒိုင်ယာရီမှာတော့ "အဖေနဲ့ ငါးမျှားသွားတယ်။ တသက်လုံးမှာ အပျော်ဆုံးနေ့ပဲ။" လို့
UK ရဲ့ မိသားစု ၄ စုမှာ တစုသာ အိမ်မှာ အဖေရှိတယ်။
အဲဒီအိမ်မှာလည်း အချိန် ၉၀% က အမေနဲ့ပဲ နေရတယ်။
ယောင်္ကျားအများအပြားက သားသမီးတွေကို စွန့်ပစ်ထားတယ်။
အဖေဖြစ်ရတာ ဘဝမှာ သိပ်ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ စိတ်ခေါ်မှုကလည်း ကြီးတယ်။
သေဒဏ်ကျခံရတော့မယ့် လူငယ်တယောက်။ တရားသူကြီးက ဒီလူငယ်ကို ငယ်ငယ်ကလေးထဲက ရင်းနှီးတယ်။ သူ့အဖေနဲ့ ရင်းနှီးတယ်။ သူ့အဖေက နာမည်ကြီး ဥပဒေပညာရှင်တယောက်။ "The Laws of Trusts" "ယုံကြည်စွာ အပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများ" ဆိုတဲ့ ကျမ်းကို ပြုစုသူ။ တရားသူကြီးက မေးတယ်။ "မင်းအဖေကို သတိမရဘူးလား?"ကောင်းကောင်း သတိရပါတယ် တရားသူကြီးခင်ဗျာ။" တရားခံရဲ့ အသိစိတ်ကြည်လင်တာကို ပြချင်တဲ့အတွက် "အခု ပြစ်ဒဏ်ခံရတော့မယ်။ မင်းအဖေကိုလည်း သတိရရင် သူ့အကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှား မှတ်မိတာ ရှိသလား?" လို့ မေးတယ်။ ခဏတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ တရားသူကြီး မမြော်လင့်ဘဲ ကြားလိုက်ရတဲ့ အဖြေကတော့ "သတိရတာက- အဖေ့ဆီ အကြံဥာဏ် သွားတောင်းပါတယ်။ စာအုပ်တအုပ် ရေးနေရာက မော့ကြည့်ပြီး 'သွားစမ်း သား၊ ငါ အလုပ်ရှုပ်နေတယ်။' အဖေနဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီးနေဖို့ သွားတော့ 'သွားစမ်း သား။ ဒီစာအုပ်က ပြီးမှ ဖြစ်မယ်။' လို့ လှည့်ပြောပါတယ်။ အဖေ့ကို တကယ့် ဥပဒေပညာရှင်ကြီးအဖြစ် အမှတ်ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ မိတ်ဆွေ တယောက်လိုလည်း သတိရပါတယ် တရားသူကြီးခင်ဗျား။"
တရားသူကြီးက "အား။ စာအုပ်တော့ပြီးတယ်။ သားကိုတော့ ဆုံးရှုံးရပါလား။" ရေရွတ်မိပါတော့တယ်။
Fred Craddock ဟာ Yale University မှာ ဆရာအဖြစ် စာသင်ပြရင်း၊ တနေ့ သူ့ဇနီးနဲ့ နှစ်ယောက်တည်း စားသောက်ဆိုင်ကို သွားတယ်။ အစားအသောက်ကို စောင့်နေတုန်း ဆံပင်ဖြူဖြူနဲ့ အဖိုးကြီးတယောက် စားပွဲတခုကနေ တခု လူတွေကို လိုက်နှုတ်ဆက်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ "ဒီကိုတော့ မလာလောက်ပါဘူး" လို့ သူ့ဇနီးကို တိုးတိုးလေး ပြောတယ်။ စိတ်ထဲကလည်း မလာစေချင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဖိုးကြီးက ရောက်လာတယ်။
"ဘယ်ကလာကြသလဲ" လို့ ရင်းရင်းနှီးနှီး မေးလာတယ်။
"သိပ်သာတဲ့ပြည်နယ်လို့ ကြားဖူးတယ်။ ရောက်တော့ မရောက်ဖူးဘူး။ ဘာအလုပ်လုပ်သလဲ"
"Phillips University မှာ ကျမ်းစာကျောင်းသားတွေကို တရားဟောနည်း သင်တယ်။"
"အိုး၊ ဆရာက တရားဟောဆရာတွေကို သင်ရတာကိုး။ ပြောပြချင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးတခု ရှိတယ်။" ပြောရင်း ခုံဆွဲယူထိုင်တယ်။ စိတ်ညစ်သွားပေမယ့် သူပြောလာတဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးက စိတ်ဝင်စားစရာပါ။
"ကျုပ်က Ben Hooper ပါ။ ကျုပ်ကို ဟိုအဝေးကြီးက တောင်တန်းတွေ တဖက်မှာ မွေးတယ်။ အမေက အိမ်ထောင်မရှိဘဲ ကလေးမွေးတာဆိုတော့ ဘဝက ခက်တယ်။ ကျောင်းစနေတောလည်း အတန်းဖေါ်တွေက နာမည်ပြောင် ပေးကြတယ်။ ကစားဖေါ်တွေက တအားစကြလို့ နားချိန်၊ စားချိန်ဆိုရင် သူတို့ကို ရှောင်ရတယ်။"
"စနေနေ့ နေ့လည် မြို့ထဲသွားရင်လည်း မျက်လုံးတွေက မီးတောက်မတတ် ကြည့်နေကြတာ။ ကလေးအဖေ ဘယ်သူလဲလို့ တွေးနေကြတာပေါ့။"
"၁၂ နှစ်သားအရွယ်ရောက်တော့ ဘုရားကျောင်းမှာ တရားဟောဆရာ အသစ်ရောက်လာတယ်။ ကျုပ်က ဘုရားကျောင်းဆိုလည်း နောက်ကျတက်ပြီး၊ စောစော ပြန်ထွက်ရတယ်။ တနေ့တော့ ကျုပ်ပြန်မထွက်ခင် ဆရာက ကောင်းကြီးပေးတယ်။ လူတွေအားလုံး ကျုပ်ကို ဝိုင်းကြည့်နေမယ်ထင်တယ်။ တံခါးဝရောက်တော့ ပုခုံးမှာ လက်တင်တာ ခံရတယ်။ မော့ကြည့်တော့ ဆရာက ကျုပ်ကို ကြည့်နေတယ်။ "
"မင်းဘယ်သူလဲ၊ ကောင်လေး။ ဘယ်သူ့သားလဲ"
စိတ်ထဲမှောင်ကျသွားတယ်။ ဆရာက အရှက်ခွဲလိုက်သလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆရာက ကျုပ်ကို စေ့စေ့ကြည့်ရင်း နားလည်သွားပုံရပြီး အားရပါးရ ပြုံးတယ်။ "နေဦး။ အခုမှ ငါသိတယ်။ မင်းမိသားစုကို ငါသိပြီ။ မင်းက ဘုရားသားပဲ။"
အားရပါးရ အော်ပြောလိုက်သေးတယ်။ "ကောင်လေး။ မင်းမှာ ကောင်းကင်အမွေ ရှိတယ်။ ရအောင်ယူဟေ့။"
အဖိုးကြီးက "ဒီစကားဟာ ကျုပ်တသက်လုံးမှာ အရေးအကြီးဆုံးစကားပဲ" လို့ ပြောပြီး တခြားစားပွဲတွေကို နှုတ်ဆက်ဖို့ ထွက်သွားပါတော့တယ်။ ရုတ်တရက် Fred Craddock သတိရသွားတယ်။ Tennessee ပြည်နယ်သားတွေ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးရာထူးကို တရားမဝင် ၂ ခါ ရွေးခဲ့ဖူးတယ်။ တခါကတော့ Ben Hooper ကို ရွေးခဲ့ကြတာပါ။
အဖေကို သားသမီးတွေက ဘယ်လို သဘောထားတတ်သလဲ ဆိုတော့-
၄ နှစ်သား- ဖေဖေက အကုန်လုပ်တတ်တယ်။
၇ နှစ်- ဖေဖေက အများကြီး သိတာပဲ။
၈ နှစ်- အဖေ အကုန်တော့ မသိဘူး။
၁၂ နှစ်- အိုး- အဖေက အကုန်လုံးတော့ မသိဘူးပေါ့။
၁၄ နှစ်- အဖေလား? ခေတ်နောက်ကျနေပြီ။
၂၁ နှစ်- အဖိုးကြီးက ဒိတ်အောက်သွားပြီ။ ဘာလုပ်တော့မလဲ?
၂၅ နှစ်- သူက နဲနဲတော့ သိတယ်။ သိပ်တော့ မသိပါဘူး။
၃၀ နှစ်- ဖေဖေ ဒါကို ဘယ်လိုထင်သလဲမသိဘူး။
၃၅ နှစ်- နေဦး၊ ဖေဖေ ဘာပြောမလဲမသိဘူး။
၅၀ နှစ်- ဖေဖေ့တုန်းက ဘယ်လိုယူဆခဲ့လဲမသိဘူး။
၆၀ နှစ်- ငါ့ဖေဖေတော့ သိမှာ သေချာတယ်။
၆၅ နှစ်- ဒီအကြောင်းဖေဖေနဲ့ တခါလောက် ဆွေးနွေးကြည့်ချင်လိုက်တာ။ ။
Posted by Papa at 1:12 AM